२०७४ सालका तीन चलचित्रः ‘ए मेरो हजुर–२’ ‘कृ’ तथा ‘लिलिबिलि’ मा कसको क्रेज कति ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment२०७४ सालका तीन चलचित्रः ‘ए मेरो हजुर–२’ ‘कृ’ तथा ‘लिलिबिलि’ मा कसको क्रेज कति ? (भिडियो)
२०७४ सालका तीन चलचित्रः ‘ए मेरो हजुर–२’ ‘कृ’ तथा ‘लिलिबिलि’ मा कसको क्रेज कति ? (भिडियो)
May 3, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, News, Videos 0
गत २०७४ सालमा प्रदर्शनमा आएका चलचित्र मध्ये तीनवटा नेपाली चलचित्रलाई तुलना गर्दा कसको क्रेज कति देखियो त ? गतबर्ष प्रदर्शनमा आएका तीन चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–२’ ‘कृ’ तथा ‘लिलिबिलि’ प्रदर्शनमा आएकाबेला ती चलचित्रमा अभिनय रहेका नायक नायिका तथा निर्माण टिम हलमा पुग्दा दर्शकको भिडलाई मापन गरेर क्रेज निर्धारण गरिएको हो ।
तीनवटै चलचित्र प्रदर्शन हुँदा गोपिकृष्ण हलमा देखिएको दर्शकको भिडको फुटेज देखाईएको छ । गतसाल प्रदर्शनमा आएको ‘ए मेरो हजुर–२’ मा साम्राज्ञी र सलिनमान, ‘कृ’ मा अनमोल र अदिति तथा ‘लिलिबिलि’ मा प्रदिप र जसितालाई मुख्य कलाकारका रुपमा देख्न सकिन्छ । यी युवा स्टाररहरबीचको क्रेजको मापनमा कसको कति ?
रिलिज भो ‘हिरो रिटर्न्स’ को शीर्ष गीत, किन सर्यो त वैशाख २८ को रिलिज मिति ? (भिडियो)
एउटै प्रेसमिटमा दुई फिल्म निर्माण घोषणा, बन्नेभए ‘प्रेमालय’ र ‘रुमानी’ (भिडियो)